သမီး​လေးဗစ်​တိုရီးယားအ​တွက်​ သီးသန့်​ထားရှိတဲ့ အလှူ​ငွေဘဏ်​အ​ကောင့်​ အပိတ်​​ခံလိုက်​​​ရတဲ့ကိစ္စရှင်းတမ်း သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယား​လေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်​​ပေါ်​ပေါက်​​ရေးအတွက်​ ဝန်းရံပါဝင်​​ဆောင်​ရွက်​သူ​တွေ၊ အလှူရှင်​​တွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းမှုနဲ့ အလှူ​ငွေလက်​ခံထားရှိတဲ့ သမီး​လေးဗစ်​တိုရီးယားကိုကူညီရန်​ သီးသန့်​ပြုလုပ်​ထားတဲ့ အလှူ​ငွေအ​ကောင့်​တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ ဧရာဝတီ AYA ဘဏ့်​အ​ကောင့်​ဟာ ဗဟိုဘဏ်​ကညွှန်​ကြားချက်​နဲ့ ဒီ​နေ့မနက်​မှာ ယာယီဆိုင်းငံ့ ပိတ်​ခံထားလိုက်​ရတယ်​လို့ သိရပါတယ်​ …။ ကိုသက္ကမိုးညိုက ဘဏ်​ကို​မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်​ရာမှာ​တော့ […]
ညဘက်ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်သူများအတွက် ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက် (၈)ချက် ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေ များသထက်များလာပြီး အိပ်ရေးမဝခြင်း၊ အိပ်စက်ပုံမမှန်ကန်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေလည်း များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရှင်တွေက ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ့်နည်းတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုမယ့်အိပ်စက်နည်းတွေကို အခုလို မျှဝေခဲ့ပါတယ် နော် … (၁) ငှက်ပျောသီးပြုတ်ရည်သောက်ပေးပါ ” ငှက်ပျောသီးကို ထိပ်နှစ်ဖက်ဖြတ်ပြီး […]
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ တားရော့ ဟောကိန်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်း ပပျောက်ပြီး ကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေကြပါစေ ( ဇူလိုင် 11 မှ 17 အထိ ) ” တနင်္ဂနွေသမီးများ […]
Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ.အမဖြစ်သူ ဒေါ်သီရိမေရဲ. တရားဝင် ဖြေရှင်းချက်…. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Wisdom Hill ကနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင် သတင်းမှန်တွေ ဆိုပြီး လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ့[…]
မိန်းမကောင်းတို့တွင်သာ တွေ့ရသော လက္ခဏာ (၈) မျိုး (၁) ထမင်းစားသောအခါ မိခင်ကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးသောမိန်းမ (၂) လင်သားကို အဝတ်စားပြုပြင်ပေးတတ်သောမိန်းမ (၃) ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသောအခါ တိုင်ပင်၍ ရသောမိန်းမ (၄) ”ကျွန်” မကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးတက်သောမိန်းမ (၅) လင်သားကို မောင်ကဲ့သို့ ရှက်ကြောက်ရိုသေလေးစားတက်သောမိန်းမ (၆) […]
ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှအတွက် အားပြည့်စေမယ့်စကားလေးနဲ့ ချစ်ဇနီးလေးကို အားပေးလိုက်တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ပရိသတ်ကြီးရေ ဟိုးအရင်တုန်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသားချောလေး ပိုင်ဇေရဲထွန်းကတော့ အခုချိန်မှာဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီး ချစ်ဇနီးလေးရယ် ကလေးသုံးယောက်ရယ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်နော်။ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ဇင်သဲနိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံက နှစ်ယောက်လုံး ချောကြလှကြလို့ နေနဲ့လရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်ညီတင့်တယ်လှတဲ့ ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ် …။ ဇင်သဲနိုင်ကလည်း ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့ […]
စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူကိုအောင်မြင်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ … စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တာ၊ ဒေါသကြီးတာတွေဟာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီစမ်းသပ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်တာကတော့ Michigan […]
VICTORIA အမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နမ့်စန်မြို့ က ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တရားခံအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ တရားစွဲ ဆို ထားမှု အ ပေါ် နမ့်စန်မြို့ ကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး ကောင်းမြတ်သူက ယနေ့ မှာတော့ […]
ပြည်သူ့ရဲတွေ ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို ဒဲ့ဝေဖန် ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် ‘ပြည်သူ့ရဲဆိုတာ အကောင့်အစစ်နဲ့ အမှန်တရားကိုသာ ပြောပြီး မရိုးဖြောင့်တဲ့ သဘော မပါတဲ့လူကို အတင်းစွဲစိ ဖမ်းရမှာ မဟုတ်ဘူး’ ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေ မှတ်ချက်ပေးလိုကိတာကတော့ အားလုံးက ချစ်ကြတဲ့ ဆယ်လီကြီး ဒေါက်တာ့ မြဝတ်ရည် ပဲဖြစ်ပါတယ် […]